URoborock S7: Ukuhlanza okuphezulu manje nge-ultrasonic scrubbing | Izindaba zamagajethi
URoborock S7: Ukuhlanza okuphezulu manje nge-ultrasonic scrubbing
UMiguel Hernandez | 18/04/2021 16:00 | General, Izibuyekezo
Izicoci ze-Robot vacuum zikhule ngosayizi namakhono ngokuhamba kwesikhathi, okuqale njengomkhiqizo osebenza ngokungabazeki ngandlela thile, sekuwumkhiqizo okwazi ukwenza izimpilo zethu zibe lula, ikakhulukazi uma sikhuluma ngalo mkhiqizo. URoborock, uchwepheshe kumarobhothi ahlakaniphile aphezulu.
Thola nathi ukuthi yini yonke imibhalo emisha futhi uma umehluko phakathi kokuhlanza amarobhothi ephezulu kungaphezulu kakhulu kwentengo, ngabe kuzofanele ngempela?
Njengakwezinye izikhathi eziningi, nakulesi sikhathi sinqume ukufaka ividiyo ekuhlaziyweni kwethu, kuphela ukuthi sithathe isinqumo sokwenza ividiyo "ekhethekile" lapho uzokwazi khona ukubona okuningi kunokubuyekezwa okulula, uzoba nemininingwane yokunemba nolwazi mayelana nokumiswa kwedivayisi nokuningi. Ukuze wenze lokhu, kufanele udlale ividiyo kuphela lapho uzothola khona yonke imininingwane amagama angakwazi ukuyithuthukisa ngokwawo. Thatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu se-YouTube lapho uzothola khona inqwaba yokuqukethwe futhi usisize ukuba siqhubeke sikhula.
1 Idizayini: Uphawu lwendlu
2 Imininingwane Yezobuchwepheshe: Akukho okushodayo
3 Uhlelo lokusebenza lweRoborock, inani elengeziwe
4 Izindlela ezahlukahlukene zokuhlanza nokukhuhla
5 Ukugcinwa nokuzimela
Idizayini: Uphawu lwendlu
URoborock uqhubeka nokubheja kokuthile okusebenzayo. Imiklamo yakhe iyabonakala kalula futhi lokho kumenzele ukwaneliseka okukhulu phakathi kwabasebenzisi bakhe. futhi ukuthengisa okuningi. Kunezinhlobo eziningi zedizayini enomklamo ofana kakhulu, onalesi sikhiphi esimaphakathi phezulu, idivaysi eyindilinga ngokuphelele futhi ende impela ehambisana nemibala emibili ongakhetha kuyo, emhlophe noma emnyama. Vele, njengenjwayelo sibheja ngezinto zepulasitiki, izinkinobho ezintathu zokumisa phakathi nendawo futhi i-LED exhumanayo eshintsha umbala wayo ngokuya ngomsebenzi omelwe.
I-Puerto de carga
Ubukhulu: 35,3 * 35 * 9,65 cm
Isisindo: I-4,7 Kg
Sinesembozo sangemuva okuthi uma usiphakamisa sikhombise ithangi eliqinile futhi inkomba ye-WiFi. Ngezansi sine-roller yenjoloba emaphakathi, isizinda sayo, isondo eliyimpumputhe kanye "nomqoqi" oyedwa, kulokhu okwenziwe nge-silicone. Ithangi lamanzi nokulungiswa kwephedi yokukhuhla kuhlala ngemuva. Idizayini efana naleyo ebonwe kuze kube manje, yebo, nayi ikhwalithi yokulungiswa kanye no-lIzinto zokwakha, ezisenza siqaphele ngokushesha ukuthi sisebenzelana nomkhiqizo we-premium. Asitholi ku-packagegin, yebo, noma yiluphi uhlobo lokushintshwa kwezesekeli zokuhlanza.
Imininingwane Yezobuchwepheshe: Akukho okushodayo
Siya ngqo emandleni okuncela, esinye sezingxenye ezinqumayo kakhulu uma kukhulunywa ngokuhlukanisa lolu hlobo lwedivayisi. Akukho okungaphansi kuka- Ama-Pascal angama-2.500 XNUMX lokho kusheshe kusenze sibone ukuthi le Roborock S7 izokwazi ukwenza ngayo yonke inhlobo yokungcola. Ukugcina okuqoqayo, kunediphozi yama-milliliters angama-470 ekhishwe phezulu futhi ine Isihlungi se-HEPA okungashintsheka uma kudingeka.
Sinoxhumano lwe-WiFi ukuphatha uhlelo lwakho lokusebenza, oluhambisana ngokuphelele ne- I-Alexa, i-Siri, ne-Google Assistant. Ekhuluma manje ngokukhuhla kwe-ultrasonic, sigxila eqinisweni lokuthi sinediphozi yama- “only” milliliters angama-300 esizokhuluma ngawo ngokulandelayo. Kubalulekile ukusho ukuthi izohambisana kuphela namanethiwekhi we-2,4GHz WiFi ukunweba ibanga lokusebenza.
Sinesiteshi sokushaja esilula futhi esijwayelekile somkhiqizo, nge-LED yesibonisi sesimo nekhebuli yokuxhuma amandla ejwayelekile. Vele, okungenani i-transformer ihlanganiswe nesisekelo esinikeza ukusebenza kahle ngokuya ngokusetshenziswa.
Uhlelo lokusebenza lweRoborock, inani elengeziwe
Isoftware iyingxenye ebaluleke kakhulu. Ukucushwa kwayo kokuqala kulula kakhulu:
Landa uhlelo lokusebenza (iOS / Android)
Vula i-Roboorock S7
Cindezela izinkinobho ezimbili eziseceleni zeRoborock S7 kuze kucwayize i-WiFi LED (lapho ithangi eliqinile)
Sesha kusuka kuhlelo lokusebenza
Faka iphasiwedi yenethiwekhi ye-WiFi
Kulula kangako ukuthola iRoborock S7 futhi isebenze. Kuvidiyo yethu uzobona izilungiselelo ezahlukahlukene kanye nokuthi kungenzeka ushintshe ulimi, hlela izikhathi zokuhlanza nokunye okuningi. Kodwa-ke, kufanelekile ukuthi sisho ukuthi ukusetshenziswa kwayo kuzosivumela ukuphatha amabalazwe asekhaya lethu, ukulungisa amazinga amathathu wamandla we-vacuum, amanye amandla amathathu okukhuhla futhi nokulungisa nezindawo esifuna ukuthi zihlanzwe kuzo.
Izindlela ezahlukahlukene zokuhlanza nokukhuhla
Siqala ngokufisa, imodi esizoyisebenzisa kakhulu futhi esebenzisa izinzwa ezahlukahlukene ze-LiDAR ukusizakala ngokusebenza:
Imodi ethule: Imodi yokusetshenziswa ephansi eletha idivayisi eduze kwamahora amathathu okuzimela.
Imodi ejwayelekile: Imodi ezovumela idivayisi ukuthi ilungise ngokuzenzakalela amandla okuncela ngokususelwa ekutholeni ukungcola nokhaphethi.
Imodi yeTurbo: Okuthile okunamandla kakhulu futhi okunomsindo, kunconywa ikakhulukazi lapho kunokungcola okukhudlwana nemfucumfucu.
Imodi enkulu: Isebenzisa amandla angu-2.500 XNUMX Pa, inomsindo omkhulu futhi singasho ukuthi ngisho kuyacasula, yebo, ngeke kube khona ukungcola okumelana nakho.
Mayelana nokuziphatha kweRoborock S7 ngophephethi Singaguquguqula phakathi kwezinketho ezintathu ezahlukene: Kugweme; Ukuklwebha nge-Ramming nokwenza kungasebenzi; Khulisa amandla okudonsa lapho kutholwa. Ngihlale ngibheja ngohlobo lwakamuva futhi ukusebenza kuye kwahluka.
Izinketho eziningi futhi zokuhlanzwa kwe-ultrasonic okusimangaze ngokunembile ukuthi isebenza kanjani kahle. Kangangokuthi singayincoma ngisho nasephaleni noma phansi, lokhu obekulokhu kuyingozi kumadivayisi afanayo kuze kube manje. Izodlidliza ngemvamisa efinyelela ezikhathini ezingama-3000 ngomzuzu. Konke lokhu akukude nokukhuhla okwenziwe ngesandla ngokwezitezi zobumba, kepha ngokubona kwami ​​kwanele ukondliwa kwansuku zonke kwedeski, yebo, khohlwa ngokukhuhla ukungcola okwaziwayo.
InesikhangisoIsigubhu samamililitha angama-300 lapho sifuna ukukukhumbuza khona, awukwazi ukufaka imikhiqizo yokuhlanza, uhlobo lomkhiqizo uqobo lukhombisa ukuthi lungathinta kabi amandla womkhiqizo.
Njengoba wazi kahle, le divayisi inenkomba yesondlo ekusetshenzisweni kwayo. Ngalokhu kufanele sikunake lokho Isihlungi se-HEPA siyagezeka nokuthi sizodinga ukufaka okunye esikhundleni sezinto ezisetshenziswayo esikhathini esingangezinyanga eziyisithupha. Ngendlela efanayo, ukuhlanzwa kuzobekwa ngendlela yokuthi:
Ibhulashi elikhulu: Masonto onke
Ibhulashi eliseceleni: Nyanga zonke
Isihlungi se-HEPA: Njalo emavikini amabili
Indwangu yokukhuhla: Ngemuva kokusetshenziswa ngakunye
Oxhumana nabo nezinzwa: Nyanga zonke
Amasondo: Nyanga zonke
Mayelana nokuzimela, Kuzohluka phakathi kwemizuzu engama-80 nemizuzu engu-180 kuya ngenani lemisebenzi, lokhu kuzosiza ukukhama i-5.200 mAh kusuka kubhethri lakho liye phezulu.
Ngokusobala le Roborock S7 igcwalisa cishe yonke into ethenjisiwe, into engalindelwa kumkhiqizo we-549 (AliExpress). Ukukhuhla kusekude nokukhuhla kwendabuko emaphusheni e-ceramic, kepha-ke, ukucocwa nokusebenza kahle okuhambisana nokufaka isicelo esiyinkimbinkimbi kusiza kakhulu ukuba ngomunye wabahlanzeli bamarobhothi abambalwa abakhipha ukwaneliseka okukhulu kunekhanda. Ngokusobala lo akuwona umkhiqizo wezinga lokungena, ngakho ukutholwa kwawo kuzodinga ukukala izidingo zethu.
Kuthunyelwe ku: 18 Apreli 2021
Ukulungiswa kokugcina: 17 Apreli 2021
Isicelo esihle futhi esiphelele
Amandla okudonsa okuphezulu nokusebenza kahle kokuhlanza
Ukukhuhla okwanele kokugcinwa kwepallet
Ukuzimela okwanele emakhaya we-90 m2 Aprx.
Akubandakanyi izinto ezisetshenziswayo ekupaketheni
Kwesinye isikhathi ayidluli ezikhaleni ezincane
Umsindo omkhulu kakhulu emandleni aphezulu
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » URoborock S7: Ukuhlanza okuphezulu manje nge-ultrasonic scrubbing
I-Samsung Odyssey G7: Ukuqapha okuphelele kakhulu kwemidlalo
The best chess imidlalo for PC